ရောဘတ် ဂရိုစတေး - ဝီကီပီးဒီးယား
Roger Bacon, Thomas Bradwardine Thomas Hobbes
ရောဘတ် ဂရိုစတေး (အင်္ဂလိပ်: Robert Grosseteste[n ၁], /ˈɡroʊstɛst/; လက်တင်: Robertus Grosseteste; c. 1168 – 8 or9October 1253) သည် အင်္ဂလိပ် နိုင်ငံရေးသမား၊ တွေးခေါ်ပညာရှင်၊ ဘာသာရေးဆရာ၊ သိပ္ပံပညာရှင်နှင့် လင်ကွန်းရှီးယားနယ် ဂိုဏ်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သည်။ (၁၄ ရာစုအစောပိုင်း ရာဇဝင်ကျမ်းပြုသူ နီကိုလက်စ် ထရဲဗစ်အရ) သာမန်မိဘများမှ ဆဖာ့ခ်ကောင်တီ (Suffolk) တွင် ဖွားမြင်ခဲ့သော်လည်း အလယ်ခေတ်လွန် စာပေတစ်ခုအရ စထရာ့ဒ်ဘရွတ်ခ်ရွာ (Stradbroke) တွင် မွေးသည်ဟု ဆိုထားသည်။ သေလွန်သောအခါ အင်္ဂလန်တွင် သူတော်စင်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြည်ညိုကြသော်လည်း တရားဝင်အခမ်းအနားဖြင့် သူတော်စင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ကား မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ အေ. စီ. ခရွန်ဘီးက အလယ်ခေတ် အောက်စဖို့ဒ်မြို့၌ သိပ္ပံနည်းကျ အတွေးအခေါ်ဓလေ့ကို စတင်တည်ထောင်သူ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်တို့၏ ခေတ်သစ်ဉာဏပိုင်းဆိုင်ရာ ဓလေ့စဉ်လာကို တည်ထောင်သူဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။
↑ The name is the Norman French form of Robert Greathead (လက်တင်: Robertus Capito, Capitus, Megacephalus, or Grossum Caput) or the gallicized Robert Grosstête (/ˈɡroʊsteɪt/ GROHS-tayt; လက်တင်: Robertus Grossetesta or Grossatesta). Also known as Robert of Lincoln (လက်တင်: Robertus Lincolniensis, Linconiensis, &c.) or Rupert of Lincoln (လက်တင်: Rubertus Lincolniensis, &c.).
↑ Hackett၊ Jeremiah M.G. (1997)၊ "Roger Bacon: His Life, Career, and Works"၊ Roger Bacon and the Sciences: Commemorative Essays၊ Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, No. 57၊ Leiden: Brill၊ p. 10၊ ISBN 90-04-10015-6
↑ Lewis၊ Neil (2019)၊ "Robert Grosseteste"၊ The Stanford Encyclopedia of Philosophy
↑ Giles E. M. Gasper, et al, Knowing and Speaking: Robert Grosseteste's 'De artibus liberalibus' 'On the Liberal Arts' and 'De Generatione Sonorum' 'On the Generation of Sounds' (Oxford University Press, 2019), pp. 9-35 and 199-225.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရောဘတ်_ဂရိုစတေး&oldid=681207" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။